၅ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမယ့် မိတ္တီလာမြို့မှ “ အီလက်ထရွန်းနစ် လူသုံးကုန်နှင့် ကားပြပွဲကြီး “ - Mandalay Directory
၅ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမယ့် မိတ္တီလာမြို့မှ “ အီလက်ထရွန်းနစ် လူသုံးကုန်နှင့် ကားပြပွဲကြီး “
မိတ္တီလာမြို့သူ/သား တွေအတွက် WINNER Economics Enterprise Services,Co.Ltd မှ ကြီးမှုးပြီး "အီလက်ထရွန်းနစ် လူသုံးကုန်နှင့် ကားပြပွဲကြီးကို" 5.2.2020 မှ 9.2.2 020 အထိ (5) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ဘယ်လို အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချ ပေးသွားမှာလဲ…?
- အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- အလှကုန်နှင့် ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ
- လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, ဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆေးဝါးများ
- ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
- စားသောက်ကုန်များ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Read More>>>တစ်ပတ်အတွင်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ၂၀၂၀ ဆိုင်ကယ်ဈေးနှုန်းများ
- ကားအရောင်းပြခန်းများ ,ကားဘတ်ထရီနှင့်တာယာများ
- အာမခံလုပ်ငန်းများ , စက်ဆီချောဆီများ
- ကား အော်ဒီယိုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးသုံးပစ္စည်းများ စတာတွေကို အချိုသာဆုံးသောဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်လို့ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိတ္တီလာမြို့မှ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လူကြီးမင်းတို့တင်သွင်း,ရောင်းချ ,ဖြန့်ဖြူးသော ကုန်ပစ္စည်းများကို
မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရောင်းအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်သုံးစွဲသူ မိဘပြည်သူများလက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပါဝင်ပြသရောင်းချနိုင်အောင် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီပွဲကို လာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များအနေနဲ့ Model and dancer Show များ၊ Game အစီအစဉ်များနှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များ စွာလည်း ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ မိတ္တီလာမြို့(ကန်တော်မင်္ဂလာခန်းမ) ဖြစ်လို့ ဆက်ဆက်သွားရောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
မိတ်တီလာမွို့သူ/သား တှအေတှကျ WINNER Economics Enterprise Services,Co.Ltd မှ ကွီးမှုးပွီး "အီလကျထရှနျးနဈ လူသုံးကုနျနှငျ့ ကားပွပှဲကွီးကို" 5.2.2020 မှ 9.2.2 020 အထိ (5) ရကျတိုငျတိုငျ ကငျြးပပွုလုပျသှားပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ ဘယျလို အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှကေို ရောငျးခြ ပေးသှားမှာလဲ…?
- အီလကျထရှနျးနဈနှငျ့ ကှနျပြူတာဆကျစပျပစ်စညျးမြား
- အလှကုနျနှငျ့ ဖကျရှငျအသုံးအဆောငျမြား
- လြှပျစဈပစ်စညျးမြား, ဖုနျးနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား
- ပွညျတှငျးပွညျပ ဆေးဝါးမြား
- ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပညာရေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြား
- စားသောကျကုနျမြား, မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးမြား စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။
- ကားအရောငျးပွခနျးမြား ,ကားဘတျထရီနှငျ့တာယာမြား
- အာမခံလုပျငနျးမြား , စကျဆီခြောဆီမြား
- ကား အျောဒီယိုနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား
- မျောတျောဆိုငျကယျနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား
- စိုကျပြိုးရေးနှငျ့ မှေးမွူရေးသုံးပစ်စညျးမြား စတာတှကေို အခြိုသာဆုံးသောဈေးနှုနျးတှနေဲ့ ရောငျးခပြေးသှားမှာဖွဈလို့ လုံးဝလကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ဈေးရောငျးပှဲတျောကွီးပဲဖွဈပါတယျ။
မိတ်တီလာမွို့မှ ကုမ်ပဏီလုပျငနျးရှငျမြားအတှကျ လူကွီးမငျးတို့တငျသှငျး,ရောငျးခြ ,ဖွနျ့ဖွူးသော ကုနျပစ်စညျးမြားကို
မိတျဆကျခွငျး၊ ရောငျးအားမွှငျ့တငျခွငျး၊ ဈေးကှကျခြဲ့ထှငျခွငျးဖွငျ့သုံးစှဲသူ မိဘပွညျသူမြားလကျထဲသို့ တိုကျရိုကျရောကျရှိစနေိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပါဝငျပွသရောငျးခနြိုငျအောငျ သတငျးကောငျးပါးလိုကျပါတယျနျော။
ဒီပှဲကို လာရောကျတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျလညျး ဖြျောဖွရေေးအစီအစဉျမြားအနနေဲ့ Model and dancer Show မြား၊ Game အစီအစဉျမြားနှငျ့ ကံစမျးမဲ အစီအစဉျမြား စှာလညျး ပါဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ မနကျ ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ မိတ်တီလာမွို့(ကနျတျောမင်ျဂလာခနျးမ) ဖွဈလို့ ဆကျဆကျသှားရောကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Electronics Show and Car Show
Model and dancer Show
၂ရကျသာ ရရှိနိုငျမယျ့ Suziki KL Seven ရဲ့ အထူးပရိုမိုးရှငျး
လာမယျ့ ဇူလိုငျလ (၁၈) ရကျနနေဲ့ (၁၉) ရကျနတှေ့မှော Suzuki KL Seven က ကားခဈြသူမြားအတှကျ အထူးပရိုမိုးရှငျးတဈခုကို ပွုလုပျပေးထားပါတယျ။